Maxay ka wada hadlayaan madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Erdogan? - Caasimada Online
Home Warar Maxay ka wada hadlayaan madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Erdogan?
Maxay ka wada hadlayaan madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Erdogan?
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed, oo maalmihii ugu dambeeyay Safar ku joogay magaalada Roma ee dalka Talyaaniga ayaa gaaray magaalada Istanbul ee dalka Turkey.
Madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa inuu magaalada Istanbul maanta kula kulmo madaxweynaha Turkey Mr Erdogan, iyaga oo ka wada hadli doono taageerada Turkey ee Soomaaliya iyo sidii loo xoojin lahaa.
Xiriirka Turkey iyo Soomaaliya ayaa mugdi u gali rabay kiiska Wariye Jamaal Kashoqji, kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saartay warsaxaafadeed lagu taageerayo Sacuudiga.